လို ကျ ပှဲ ခ ယျ မ လေး မြား - Owl Myanmar News
လို ကျ ပှဲ ခ ယျ မ လေး မြား
စုစု က ခုမှကြောငျးပွီးကာစ အလုပျသငျဆရာဝနျမလေး.. အမေဖြဈသူ မုဆိုးမ ဒျေါခငျနု နှငျ့အတူ ညီမငယျနှဈယောကျဖွဈသူ မူမူ နဲ့ သူသူ တို့ မိနျးမသား လေးယောကျသာရှိသညျ… ဒျေါခငျနုက မုဆိုးမဆိုပမေယျ့ လငျယောကငြ်္ားမဆုံးခငျကခနျြခဲ့သော စညျးစိမျမြားကို အရငျးနှီးပွုပွီး ရတနာပွဲစားလုပ်ကာ ရှဆေိုငျဖှငျ့ထားသဖွငျ့ နောကျအိမျထောငျမပွုဘဲ သမီးသုံးယောကျစလုံးကို သငျ့တောငျ့သငျ့တယျထားနိုငျသညျ… ဒျေါခငျနုက အရှယျတငျသလို လှလညျးလှသညျ.. အားကစားလိုကျစားတော့ ကိုယ်လုံးက အလတျကွီးကနျြသေးသညျ…ပှဲစားလောကထဲတှကျ မသေနျးနုဟု နာမညျကွီးသညျ.. ဒျေါခငျနုကတော့ စီးပှားရေးနဲ့ သမီးသုံးယောကျရှရေ့ေးကိုသာ အာရုံစိုကျသူဖွဈသညျ.. ခုလညျး သမီးကွီးစုစု ကြောငျးပွီးလို့ ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံတဈခုမှာ အလုပျသငျ အနနေဲ့စဆငျးရသညျ… စုစုတို့ ညီအဈမသုံးယောကျစလုံးကလညျး အမအေတိုငျးပဲ ဖွူဖွူဖှေးဖှေး လုံးကွီးပေါကျလှလေးတှဖွေဈသညျ.. စုစုကတော့ သမီးအကွီးပီပီ မကျြနာတညျသညျ.. ဆရာဝနျလောငျးဆိုတဲ့ပညာမာနရှိသညျ.. ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျကတော့ အိခြောပိုလိုမြိုး.. မကျြနှာကကြတော့ မငျးသမီးပနျးဖွူလိုမြိုး နှဈလိုဖှယျဖွဈသညျ…
စုစု အလုပျစဝငျပွီး သုံးလလောကျနတေော့ တစ်မိသားစုလုံး မွို့ထဲကတိုကျခနျးကိုရောငျးပွီး ဖော့ကနျဘကျတှကျ လုံးခငျြးအိမျလေးတဈလုံးဝယျကာ ပွောငျးနကွေသညျ.. မွို့ထဲနှငျ့အနညျးငယျအလှမျးဝေးပမေယျ့ ဒျေါနုကအေးဆေးနခေငျြသောကွောငျ့ ပွောငျးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ…
ဒီနစေု့စု ညဂြူတီကသြညျ.. နလေညျးသိပျမကောငျးခငျြတော့.. ခှငျ့ယူပွီး အိမျစောစောပွနျဖို့ လုပျသညျ.. အိမျကိုဖုနျးဆကျဖို့ လုပျတော့ဖုနျးတိုငျကပြောကျနသေညျ… ပွနျနကေပြဲလေ ကိစ်စမရှိဘူးဟုတှေးပွီး ဒညငျးကုနျးထိပွနျမညျ့ ဆေးရုံကကားနှငျ့ လှမျးကွုံစီးပွနျလိုကျသညျ… စုစုတို့လမျးထိပျရောကျတော့ ကားရပ်ကာ စုစုဆငျးသညျ… အခြိနျက ည ၉နာရီခနျ့… ခုထိဖုနျးလိုငျးကမမိသေး.. မီးကပကျြနသေညျ… မိုးဖှဲမြားကနြပွေီး လအေနညျးငယျပါသညျ.. လမျးထိပျကနေ အိမ်ထိဆို အနညျးဆုံး ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျလြှောကျရမညျ..စုစု စိတျညဈသှားပမေယျ့ ဖုနျးမီးလေးဖှငျ့ကာ မှောငျမဲနတေဲ့လမျးကွားထဲ တဈယောကျတညျးပွနျလာသညျ..အနညျးငယျကွောကျပမေယျ့လညျး ပုံမှနျပွနျနကေဖြွဈသောကွောငျ့ စိတျအေးအေးထားကာ ပွနျသညျ.. လြှပျစီးလကျသံနှငျ့အတူ လေးပွငျးပွငျးလေးတိုးဝလေို့ကျတိုငျး စုစု ထဘီပေါငျပျေါထိလှနျသောကွောငျ့ ထဘီကိုလညျး မနညျးထိနျးကိုငျကာလြှောကျရသညျ.. မိမိနောကျတှငျအန်တရာယျ တဈစုံတဈခုပါလာသညျကိုတော့ စုစု ကွိုသတိမထားမိခဲ့… ခွသေံသဲ့သဲ့လေးကွားမှ အနောကျလှညျ့ကွညျ့မယျလုပျတုနျး..
“အှနျ့…” စုစု ပါးစပ်ကို ပိတ်ကာ လညျမွိုကို အခြှနျတဈခုနှငျ့ထောကျထားသညျ.. “မငျးနညျးနညျးလေး လှုပျတာနဲ့ မငျးသပွေီသာမှတျ.. ငါ့နောကျငွိမျငွိမျလေးလိုကျခဲ့…” ဟုဆိုကာ.. စုစုလညျး သမှောကွောကျတော့ အသာတကွညျလိုကျသှားရသညျ…
ရပျကှကျနှငျ့ အလှမျးဝေးသော အိမျအိုတဈလုံးထဲ.. အငျဗာတာ မီးသီးမှိနျမှိနျလေး ထှနျးထားသညျ.. သငျဖြူးဖွာ အနှမျးပျေါမှ စုစုက လကျနောကျပွနျကွိုးတုပျခံထားရပွီး ဘေးစောငျးလှဲနသေညျ… ခွသေံကွားရာဆီလှမျးကွညျ့လိုကျတော့ မငျးဒငျ…
မငျးဒငျကား တခွားသူမဟုတျ ရပျကှကျထဲနာမညျပကျြ မှုဒိမျးကောငျထောငျထှကျကားသမားပငျ.. ပွီးခဲ့တဲ့တလော စုစုတို့အိမ်နား မငျးဒငျဖွတျလြှောကျနတေုနျးဘေးအိမျက အဒျေါကွီးပွောပွလို့ မငျးဒငျမကျြနှာကို ကောငျးကောငျးမှတျမိသညျ… မုဒိမျးကောငျဆိုပမေယျ့ မငျးဒငျက ရုပျသနျ့သညျ.. အသားညိုညို ဘျောဒီတောငျ့ပွီးရငျအုပျကယျြသညျ.. ပါးသိုငျးမှေးရေးရေးလနေဲ့ ယောကငြ်္ားပီသသညျ.. ပုံမှနျစျောကွှလေောကျတဲ့ ရုပျရညျဆိုပမေယျ့ ဝါသနာကွောငျ့သာ မုဒိမျးကောငျဖွဈနခွေငျးပငျ.. အလိုတူတူ မတူတူ မငျးဒငျလိုးခဲ့သညျ့ မိနျးမမြားမှာ ဘဝပကျြခဲ့ရတာကွီးပငျ.. ဒါကိုလညျး မငျးဒငျကဂုဏျယူနခွေငျးပငျ..
မငျးဒငျကိုမွငျတော့ စုစုအခွနေကေို သဘောပေါကျသညျ.. ဘဝပကျြတော့မညျ.. တဈသကျလုံးရညျးစားမထားဘဲ မိသားစုအရေးနှငျ့ ပညာရေးကိုသာ ဥိးစားပေးခဲ့သမြှ ခုတော့ မုဒိမျးကောငျကွောငျ့ ဘဝပကျြရတော့မညျ… ” ကမြတောငျးပနျပါတယျရှငျ.. ပွနျလှတျပေးပါနျော.. ရှငျလိုခငျြတာ ပေးပါ့မယျ.. ဟငျ့” ငိုသံနှငျ့အသနားခံလပွေီ… မိုးကသညျးသထကျပိုသညျးလာပွီး မိုးခွိမျးသံတှကေ စကားသံကိုပါမကွား.. မငျးဒငျက ဟကျဟကျပကျပကျရယျမောလိုကျပွီး.. ” ဟားဟား.. အေး.. ငါ လိုခငျြတာကလညျး မငျးပေါငျကွားထဲက စောကျပတျဖောငျးဖေားငျးလေးကိုကှ…ဟားဟား…” ရိုငျးစိုငျးရငျ့သီးလှနျးတဲ့စကားကွောငျ့ စုစုလညျး ပူထူသှားပွီး “ရှငျ လူယုတျမာ.. ကယျကွပါဦးရှငျ…..” သံကုနျခွဈအျောသျောလညျး မိုးသံကိုတော့ မလှမျးမိုးနိုငျ…”ဟား ဟား အျောစမျးပါ ဆရာမလေးရဲ့…ဘယျလောကျအျောအျောထူးမှာမဟုတျ… စိတ်ချပါ မငျးကိုတဈခါပဲလိုးပွီး ပွနျလှတျပေးမှာပါ… ” ပွောရငျး ရမ်မကျ အပွညျ့နှငျ့ စုစုနားတိုးလာပွီး ထဘီစကပျအကှဲအတိုငျး ပေါငျသားဖှေးဖှေးကို ဖိပှတျလိုကျသညျ… စုစုရုနျးသညျ.. မငျးဒငျကို ခွတေောကျဖွငျ့ကနျတော့ မငျးဒငျက ခွတေဈဖကျကိုဖိထိုငျပွီး တစ်ဖက်ကို ဘယျဘကျခြိုငျးအောကျထညျ့ကာခြုပျလိုကျတော့ ပေါငျကားပွီးသားဖွဈသှားသညျ.. ထဘီအကှဲဝတျထားတော့ ပေါငျဖွူဖွူကွားက ပငျတီအနီလေးပါပျေါလာသညျ… မငျးဒငျက အကွမျးကွိုကျသူမို့ ပငျတီပျေါကနေ စောကျပတျကို ဖိညဈသညျ…”အား..” နာကငျြလှနျးလို့အျောသံက အခနျးထဲတှငျပြှံ့လှငျ့နသေညျ…
ပွီးမှ ပငျတီကိုဆှဲခြှတျပွီး ခြှေးဆို့နတေဲ့ စောကျပတျကဉျြးလေးထဲ လကျနှဈခြောငျးပူးကာ ကွမျးကွမျးလေး ထိုးကလျောလိုကျသညျ… ” အား မလုပျပါနဲ့ရှငျ တောငျးပနျပါတယျရှငျ..” နာကငျြလှနျးလို့ စုစု မကျြရညျပိုးပိုးပေါကျပေါကျကတြော့ မငျးဒငျပိုကနြေပျသှားကာ စုစုရဲ့ရငျဖုံးအကငြ်္ီကွယျသီးတှကေိုဆှဲဖွုတျပွီး ဘျောလီအနကျရောငျကို ဆှဲဖွဲကာ တငျးရငျးနတေဲ့ နို့ဖွူဖွူနှဈလုံးကို အငမျးမရဆှဲစို့သညျ.. စုစု ရငျဘတျတဈခုလုံး တံတှေးတှနေဲ့ စိုရှဲသှားသညျ… ပွီးမှ မငျးဒငျက ပုဆိုးခြှတျခလြိုကျတော့ ခုနှဈလကျမလောကျရှညျတဲ့ လီးက မွငျရသူစုစုအဖို့ အသကျရှူရပျလောကျအောငျထိတျလနျ့စသေညျ.. လုံးပတ်က ရသေနျ့ဘူး အသေးဆိုဒျလောကျရှိသညျ.. မပွောမဆိုနဲ့ စုစုပေါငျကိုဖွဲပွီး စောကျပတျကဉျြးကဉျြးလေးထဲ လီးတကေ့ာ စလိုးတော့သညျ..
လကျခြောငျးနှငျ့ထိုးကတညျးက နာပွီးသှေးထှကျနတေဲ့စောကျပတျက အခုပိုနာရသညျ.. မငျးဒငျ မညာမတာဘဲ နို့ညဈပွီး အသားကုနျစောငျ့လိုးသညျ.. စုစုမှာတော့ နာလှနျးလို့ အျောရသညျ.. အမမှေေးကတညျးက ဒီအရှယျအထိ ရခြေိုးဆပျပွာတိုကျရငျတောငျ နာမှာဆိုးလို့ ဖွဖွလေး လုပျပွီး ယုယုယယထားခဲ့တဲ့ စောကျပတျနုနုလေး.. ခုတော့ မုဒိမျးကောငျ စိတျကွိုကျ အကွမျးပတမျးလိုးတာခံနရေသညျ.. “ဖှတျ ဖှတျ ဘုတျ ဗွဈ ဗွဈ…” လိုးသံက တဈခနျးလုံး ပှကျပှကျညံနသေညျ… အိမျပွငျ တံစကျမွိတျကရကေသြံထကျ မငျးဒငျရဲ့ လိုးချက်က စညျးခကျြပိုကသြညျ… ဆယျ့ငါးမိနှဈခနျ့ အားရပါးရစောငျ့လိုးပွီး.. စုစုစောကျပတျပူနှေးသှားတဲ့အထိ လရညျတှပေနျးထညျ့လိုကျသညျ.. မငျးဒငျ ပုဆိုးပွနျဝတျပွီး စီးကရကျမီးညိကာ.. သှေးထှကျနတေဲ့ ဆရာဝနျလောငျး စောကျပတျလေးကိုကွညျ့ရငျး ပီတိဖွဈရသညျ… စုစုကတော့ ရှိုကျကွီးတငငျငိုနဆေဲ.. အိမျပွငျမှာမိုးကလညျး အဆကျမပွတျရှာနသေေးသညျ….
“သမီးသူ့ကို တဈသကျတဈကြှနျးထောငျခနြိုငျရငျ တောငျ ကမ်ဘာမကွနေိုငျဘူး မမေေ..” စုစု ရဲ့မကနြေပျနိုငျလောကျတဲ့စကားကို ဒျေါခငျနုက လူကွီးပီပီ အခြိနျယူပွီးစဉျးစားသညျ…ပွီးမှ..”ကဲ သမီး အမကေို့ပွော.. မနညေ့ကကိစ်စကို ဘယျသူတှသေိသေးလဲ…” ဒျေါစုရဲ့ မေးခှနျးကို စုစုက ရှကျရှကျနှငျ့.. “မမေရေယျ.. သမီးရယျ.. အဲ့ လူယုတျမာ မုဒိမျးကောငျရယျ.. သုံးယောကျတညျးပါ…” စုစုရဲ့ ဒေါသသံပါတဲ့ ဖွပေုံကို ဒျေါနုသခြောနားထောငျပွီး မကျြခုံးပငျ့ကာ..”ကဲ ပွောပါဦး.. အဲ့ကောငျက ဘာအလုပျလုပျလဲ…” ဒျေါနုရဲ့ အမေးအမွနျးကို စုစုက စိတျမရှညျပမေယျ့ ပွနျဖွလေိုကျသညျ…” ဘေးအိမျက အဒျေါကွီးကတော့ အဲ့ကောငျက ညဘကျတက်ကစီမောငျးတယျတော့ ပွောတာပဲ…” ဒျေါနု ဆယျမိနဈလောကျ သခြောစဉျးစားပွီးမှ သကျပွငျးရှညျခကြာ…”ဟူး…. ဒီမှာသမီး… သမီးအတှကျ နှဈနာပွီး တဈဖကျသတျဆနျနမှောကိုတော့ မမေသေိတယျ.. အမေ့သမီးကို စျောကားတဲ့ သူ့ကို အမကေပိုလို့တောငျစိတျနာသေးတယျ…ဒါပမေယျ့ သူ့ကိုလကျထပျလိုကျပါသမီး…” အံသွလောကျတဲ့ ဒျေါခငျနုစကားက စုစုနားထဲ သံရညျပူလောငျးသလိုဖွဈသှားသညျ.. မဖွဈနိုငျတာ ကိုယျ့ကိုစျောကားတဲ့ မုဒိမျးကောငျကိုလကျထပျ ဖို့ဆိုတာ… “အမေ… ဘယျလိုဖွဈလို့.. ဒီစကားထွက်တာလဲ ” စုစု မယုံကွညျနိုငျဘူး…
ဒျေါခငျနုကဆကျပွီး..”အငျး သမီး.. မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာဟုတျတယျ.. ဒါပမေယျ့ သမီးဖွဈအောငျလုပျပေးရမယျ.. အဲ့ကောငျကို တရားစှဲထောငျခပြွီပဲ ထားပါဥိး.. သမီးက အပြိုမဟုတျတော့မှနျး သူမြားသိတော့ လူတှကေသမီးကို ဘယျလိုမွငျကွမလဲ.. သမီးကိုကော လိပျပွာသနျ့သနျ့နဲ့ လကျထပျယူကွမယျ ထငျလား.. သမီးရဲ့ အသိုငျးအဝိုငျး အမရေဲ့အသိုငျးအဝိုငျး နောကျဆုံး မငျးညီမလေးနှဈယောကျ ကြောငျးမှာ မကျြနှာ ဘယျလိုပွမလဲ…ဘဝမှာအမဲစကျအနနေဲ့ ကနျြနခေဲ့မှာ.. ပွီးတော့ မွနျမာမိနျးမသိက်ခာ.. အမကေိုယျတိုငျကလညျး သမီး အဖနေဲ့ကလှဲပွီး ဘယျယောကငြ်္ားနဲ့ မှ လိငျမဆကျဆံခဲ့ဘူး… သမီးကိုလညျး အမလေို့ပဲဖွဈစခေငျြတယျ… သူမြားနဲ့ ဆကျဆံပွီးမှ နောကျထပျတဈယောကျကို လကျထပျမယူစခေငျြဘူး.. ဒါ အမဆေ့န်ဒပဲ.. အမလေညျး သူ့ကိုရှံပမေယျ့ မိသားစုသိက်ခာအတှကျ သူ့ကို လကျထပျလိုကျပါသမီး…” ဒျေါခငျနု စကားလညျးဆုံးရော စုစု အျောငိုတော့သညျ.. မလှဲသာသညျ့အဆုံး မုဒိမျးကောငျကို လကျထပျရနျ သဘောတူလိုကျရသညျ…. မငျးဒငျ အဖို့တော့ ဘယျလိုမှမယုံကွညျနိုငျလောကျတဲ့ အခွအေနေ.. ကွညျ့လေ.. ညဖကျတက်ကစီ ခိုးဆွဲ တဲ့ မုဒိမျးကောငျဘဝကနေ.. ဆရာဝန်မ လငျ သူဌေးသားမကျ ဘဝသို့ ရောကျနပွေီတကား…
ဒီည.. မင်ျဂလာဦးည…. ဟို တဈခေါကျက အတငျးရုနျးလို့ အတငျးမုဒိမျးကငျြ့ခဲ့ရတော့ စုစုရဲ့ အလှအပကိုသခြောမခံစားမိခဲ့.. ခုတော့ ကံတရားရဲမျက်နာသာက ဆရာဝနျမခြောခြောလေးကို ဇနီးအဖွဈ တရားဝငျ လိုးခှငျ့ရပွီလေ… စုစုမှာတော့ မငျးဒငျကို ရှံတဲ့စိတျက ဖြောကျလို့မရ… အိပျခနျးထဲ မငျးဒငျရောကျတော့.. စုစုက ဂရုမစိုကျဘဲ စားပှဲပျေါက ဖိုငျတှဲတှနေဲ့ အလုပျရှုပျနသေညျ.. ညလညျး ဆယျနာရီကြျောပွီမို့ မငျးဒငျက စိတျမရှညျဘဲ စုစုအနောက်ကနေ လှမျးဖကျပွီး နို့နှဈလုံးကို ညဝတျဂါဝနျပျေါက ဖှဖှလေးကိုငျကာ လညျတိုငျဖွူဖွူလေးကို နမျးပွီး..” ခဈြလေး အိပျတော့မယျလကှော.. ကိုကဂစောငျ့နတောခဈြလေးကို ဟဲဟဲ…” စုစုကလညျး.. “ဒီမှာ အလုပျလုပျနတော နားမလညျဘူးလား.. ရှငျ့ဖာသာအိပျခငျြအိပျ မနိုးလကေောငျးလပေဲ..” သူစိမျးဆနျလှနျးတဲ့ စုစု စကားကို မငျးဒငျစိတျမဆိုးဘဲ.. ခြိုငျးအောကျက လကျလြှိုကာ ဘျောလီမဝတျထားတဲ့ ရငျနှဈမှာကိုညဈပွီး နို့သီးခေါငျး လေးတှကေိုခပြေေးလိုကျသညျ.. စုစုရဲ့ ခါးကိုလညျး လီးဖွငျ့ထောကျထားသေးသညျ.. စုစုကရုနျးသျောလညျး.. မငျးဒငျရဲ့ ဆရာကလြှနျးသော နို့ကလိမှုကွောငျ့ ငွိမျသှားသညျ.. ပွီးမှ စုစု ကိုမကျြနာခငျြးဆိုငျရပျစပွေီး.. နှုတျခမျးကိုစုပျနမျးပွီး.. ဂါဝန်မကာ ဖငျနှဈခွမျးကို ပှတျသညျ.. စုစုကို စားပှဲပျေါထိုငျစပွေီး.. ဂါဝန်ကို အပျေါလှနျကာ ပေါငျဖွဲလိုကျတော့ အနာပငျမကကျြသေးတဲ့ စောကျပတျလေးက ပွူးထှကျလာသညျ.. မငျးဒငျစိတျမထိနျးဘဲ စောကျစိကို စုပ်ကာ လြှာနဲ့လြှကျတော့သညျ.. “ရှတျ အား အငျး ရှငျဘာတှလေုပျနတောလဲ.. ညဈပတျတယျ…” စုစု မနနေိုငျတော့ဘဲ မငျးဒငျခေါငျးကို ကိုငျကာ ပေါငျကွားထဲ အတငျးထိုးကပျသညျ..
စောကျရညျကွညျမြားထှကျလာတော့ မငျးဒငျမွိုခပြွီး ဖငျညဈကာ စောကျပတျခေါငျးထဲထိလြှာနဲ့ထိုး ကလိသညျ…”ပလပျ ရှီး အား…..” ခန နတေော့ စောကျခေါငျးထဲမှအရညျမြားထှကျလာပွီး စုစု တဈခြီပွီးသှားသညျ… “ဘယ်လိုလဲ ကောငျးလား သဲလေး…” မျက်နာမှာ စောကျရညျပပှေနတေဲ့ မငျးဒငျအမေးကွောငျ့ စုစုနရေခကျသှားသညျ.. တဈခါမှ မခံစားဖူးတာမို့ အရသာထူးကဲနသေညျ.. ခေါငျးလေးသာငွိမျးလိုကျသညျ… မငျးဒငျက ပွုံးပွီး စုစုကို ကုတငျပျေါပှကေ့ာ.. တဈကိုယျလုံးခြှတျလိုကျတော့ အားပါး.. နတျမိမယျလေးလိုပငျ.. လိုးဖူးသမြှမိနျးမတှထေဲ ဒီမိနျးမအလှဆုံးပငျ.. ကိုယ်လုံးတီးအလှ နဲ့ စုစုကိုကွညျပွီး မငျးဒငျ စိတျမထိနျးနိုငျတော့ လီးထိတျ တံတှေးစှတျပွီး စောကျပတျဝတေ့ ကာဖွညျးဖွညျးခငျြးလိုးသညျ..”ဗွိ ဗွဈ အငျ့ အား…” တဈခါကွမျးကွမျးခံဖူးတော့ ဒီတဈခါ စုစုသိပ်မနာဘဲ မငျးဒငျ လိုးခကျြတိုငျးကို ကော့ကော့ပေးသညျ… ပွီးမှ စုစုကို ဖငျကုနျးခိုငျးကာ အနောက်က စောငျ့လိုးသညျ… လကျညိုးကလညျး စအိုဝကို ထိုးကလိသညျ.. ခါးကိုငျလိုးလိုကျ ဆံပငျစောငျ့ဆှဲပွီးလိုးလိုကျလုပျသညျ….”အား ကောငျးလိုကျတာ သဲလေးရာ စောကျပတျက စီးနတောပဲ… ဘှတျဘှတျ” စောကျ့လိုးခကျြနဲ့ အတူ နို့နှဈလုံးက ပွုတျထှကျမတတျခါရမျးနသေညျ… မငျးဒငျလညျး အားရပါးရ ဆကျတိုကျစောငျ့လိုးပွီး သုတျရညျမြား ပနျးထညျ့ကာ ပွီးသှားတော့သညျ.. ထို မင်ျဂလာဦးညမှ စပွီး စုစုလညျး မငျးဒငျကိုအမွငျကွညျသှားသညျ.. တဈရကျဂအနညျးဆုံး နှဈခါလောကျတော့ အလိုးခံပေးသညျ.. စောကျပတျကော ပါးစပျကော ဖငျကော နတေို့ငျး အလိုးခံရသညျ…
မငျးဒငျက ကားမောငျးရုံကလှဲပွီးဘာမှ မလုပျတတျသောကွောငျ့ အိမျကားမောငျးရသညျ.. ဒျေါခငျနုကတော့ မငျးဒငျကို ဒရိုက်ဘာ တဈယောကျလိုသာ ဆကျဆံသျောလညျး အလတျမနှငျ့ အငယ်မကမူ မငျးဒငျကို ခဈြကွသညျ အစ်ကို တဈယောကျလို အားကိုးသညျ.. အိမျမှာ ယောကငြ်္ားသားမရှိခဲ့လို့လညျးဖွဈမညျ.. ဒီနှဈယောကျတညျးမှာမှ အငယ်မ သူသူ ကပိုကဲသညျ.. မငျးဒငျနှငျ့ ဖငျပုတျခေါငျးပုတျနသေညျ.. တဈခါတလေ ဧညျ့ခနျးထဲ tv ကွညျ့ရကျး မငျးဒငျပေါငျပျေါမှာ ကလေးလိုပငျ အိပျပြျောတတျသညျ.. စုစုက တော့ ညီမလေးနှဈယောကျ မိမိအမြိုးသားကို အားကိုးသောကွောငျ့ ပီတိဖွာရသညျ.. ဒျေါခငျနုကတော့ ဂရုကိုမစိုကျ ခပျတနျးတနျးပငျနသေညျ… မငျးဒငျမူကား.. စားနကေကြွောငျပါးပီပီ.. တဈအိမျလုံးကို သိမျးခငျြသညျ.. သိမျးခငျြတယျဆိုတာ ပစ်စညျးဥစ်စာမဟုတျ.. သိမျးကြုံးလိုး ခငျြတာကိုပွောတာ.. ဒါကွောငျ့လညျး အခှငျ့ရေးတှဖေနျနခွေငျးဖွဈသညျ…
တဈနေ့… မငျးဒငျနှငျ့ သူသူတို့နှဈယောကျတညျး ဧညျ့ခနျးမှာ tv ကွညျ့သညျ.. ထုံးစံအတိုငျး သူသူက မငျးဒငျပေါငျပျါအိပျကွညျ့ရငျး မှေးကနဲအိပျပြျောသှားသညျ… သူသူက ခုမှ ကိုးတနျးဆိုပမေယျ့ မငျးသမီးငယျလေး ယှနျယှနျးနှငျ့ပုံစံတူ.. နုတျခမျးဖူးဖူးလေး နို့မကွီးဖငျမကွီးဆိုပမေယျ့ အပြိုတော့ဖွဈနပွေီ.. မငျးဒငျအဖို့တော့ မိနျးမမှနျလြှငျ ရာသီလာကတညျးက စလိုးမယျ့ အရှယျဟု ခံယူထားခွငျးပငျ.. ခုလညျးကွညျ့ အငယ်မ မိသူ့ ပေါငျပျါအိပျနပေုံ.. အပွဈကငျးစငျလှနျးလှသညျ.. မငျးဒငျက သူသူ ညဝတျအကငြ်္ီအာကျလကျလြှိုကာ ဗိုကျသားမှတဆငျ့ ဘရာမဝတ်ထားတဲ့ နို့သေးသေးလေးနှဈလုံးကို ပှတျသညျ.. သူသူ အနညျးငယျ လှုပျရှားလာတော့ မငျးဒငျလှနျ့သှားသေးသျောလညျး ပွနျငွိမျသှားမှ မငျးဒငျစိတျသကျသာပွီး ပွုံးလိုကျသညျ.. ပွီးမှ ညဝတျဘောငျးဘီပါးအောကျကနေ စောကျပတျကို စမျးကွညျ့တော့ အရညျခြှဲမြားဆိုနသေညျ.. ဒီကောငျမလေး အိပျခငျြဟနျဆောငျနမှေနျး မငျးဒငျရိပျမိသှားသညျ… ထို့ကွောငျ့ သူသူ့လကျတဈဖကျကို ယူကာ ပုဆိုးအောကျထညျ့ပွီး လီးကိုငျခိုငျးတော့ သူသူလညျး ဖွဖွလေး ကိုငျထားသညျ.. ဇာတျလမျးကတော့ အဆငျပွနေပွေီ..
“ကို မငျးဂ.. မအိပျသေးဘူးလား မိုးခြုပျနပွေီ…” ရုတျတရကျ အခနျးထဲမှ စုစု ချေါသံကွောငျ့ မငျးဒငျကော သူသူကောဂလှနျ့ပွီးငွိမျသှားသညျ.. မငျးဒငျ အိပျခနျးထဲ ဝငျသညျအထိ သူသူကတော့ ဆိုဖာပျေါမှာ အိပျဟနျဆောငျနဆေဲ….
ဒီနေ့ အလတျမကို ကြောငျးအရငျပို့ရမညျ.. ပွီးယောက်ခမ.. ပွီးမိနျးမစုစု ကို ဆေးရုံရှခေ့ပြေးလိုကျသညျ… သူသူကိုကြောငျးပို့ဖို့ပဲကနျြသညျ.. ကြောငျးက ၉ နာရီမှတကျမှာ ခုမှ ၈နာရီကြျောကြျော.. ဆေးရုံနှငျ့ကြောငျးက သိပျမဝေးတာမို့ဂဆယျမိနဈလောကျသာမောငျးရမညျ….” ဟဲ့ မိသု အရှခေ့နျးလာထိုငျစမျး လာ…” မငျးဒငျကချေါတော့ သူသူလညျး အရှခေ့နျးဝငျထိုငျသညျ…ဆံပငျကိုငါးရိုးပုံစညျးထားပွီး သနပျခါးပါးကှကျကွား ရငျဖုံးကြောငျးဖွူလေးနဲ့ ခယျမငယျလေး သူသူ လှပွီးခဈြစရာကောငျးလှနျးလှသညျ..ကြောငျးစိမျးခြိတျထဘီစကပျနှငျ့ ကားပျေါတကျတော့ ပေါငျသားဖှေးဖှေးလေးကို တှရေ့သညျ.. မငျးဒငျ ငပဲကို မနညျးထိနျးပွီး ဆေးရုံမှ စမောငျးထှကျတော့သညျ.. ကြောငျးမရောကျခငျ လမျးတဈဝကျလောကျ မီးပှိုငျ့မိသညျ.. ရုံးတကျကြောငျးတကျခြိနျမို့ တျောတျောကွာမညျကို သိသညျ.. ထိုစဉျ မငျးဒငျလကျက သူသူပေါငျပျေါကနစေပံတျတော့သညျ..
သူသူလညျးဘာမှမတုံ့ပွနျဘဲငွိမျခံနသေညျ.. စိတျကစားတတျတဲ့အရှယျဖွဈတော့ မငျးဒငျက အထာနပျသညျ.. လကျကအရဲစှနျ့ကာ ထဘီကွားထဲဝငျပွီး ပေါငျသားလေးကိုပှတျနတေုနျး မီးပှိုငျ့စိမျးသှားသညျ… ကြောငျးရှရေ့ောကျတော့.. “ပေးစမျး မငျးလှယျအိတျ..” ဟုပွောကာ သူသူလှယျအိတျထဲမှ ခှငျ့စာကဒျယူဖွညျ့ပွီး “ဘယျ မသှားနဲ့ ..ကားပျေါကစောငျ့နေ..” ဟုဆိုကာ ကားတံခါးပိတျပွီး ကြောငျးထဲဝငျ ခှငျ့စာသှားပေးပွီး ပွနျရောကျလာကာ “မငျး ဒီနေ့ ကြောငျးမတကျနဲ့.. ခှငျ့တိုငျပွီးပွီ..” ဟုပွောပွီး ကားမောငျးကာ အိမျပွနျသညျ.. သူသူက ဘာတဈခှနျးမှ မပွော စိတျကစားတဲ့အရှယျဖွဈသလို မငျးဒငျနဲ့ စုစု လိုးတာကိုလညျး မွငျဖူးသောကွောငျ့ ယခုကဲ့သို့ မငျးဒငျအပျေါစိတျယိုငျမိခွငျးပငျ… “ကြှိ….” အိမျရှကေ့ားထိုးရပျပွီး… ဧညျ့ခနျးထဲဝငျထိုငျကာ… မငျးဒငျက.. “လာ မိသု.. ငါ့ပျေါထိုငျ” ပွောပွီ.. သူသူကို ဆွဲကာ ပေါငျပျေါထိုငျခိုငျးသညျ.. ပွီးမှ သနပျခါးတငျထားတဲ့ ပါးပွငျကို အနမျးပေးပွီး နုတျခမျးကိုလြှာနဲ့ အတငျးထိုးထညျ့ကာ စုပျနမျးတော့သညျ.. လကျကလညျး ကြောငျဖွူအကငြ်္ီပျေါကနေ နို့လေးကိုငျလိုကျ ဖငျလေးပှတျလိုကျလုပျသညျ..
သူသူ ကတော့ မငျးဒငျပွုသမြှ ငွိမျခံနသေညျ.. မငျးဒငျက ဆကျပွီး သူသူ့ရငျဖုံးအကငြ်္ီကို ခြှတျပွီး ဘရာဇီယာကိုပါ ခြိတျဖွုတျလိုကျတော့ ရနှေေးခှကျအရှယျ နို့လေးနှဈလုံးက ထှကျလာသညျ.. နို့သီးခေါငျးလေးတောငျ သေးနသေေးသညျ.. မငျးဒငျက နို့သီးခေါငျးလေးကို ဆှဲခလြေိုကျ စို့လိုကျလုပျတော့ သူသူ ခါးကော့သှားသညျ.. “အငျး အား ကို့ကွီး ရယျ ဟငျ့…” ကြောငျးစိမျးထဘီ ခြိတျကိုပါဖွုတျခြှတျပွီး ပငျတီအပနျးရောငျလေးကိုပါခြှတျလိုကျတော့ သူသူတစ်ကိုယ်လုံး အဝတျဗလာဖွဈသှားသညျ.. ငယျသျောလညျး ထွားတဲ့ အလှကိုကွညျ့ရငျး မငျးဒငျတံတှေးမွိုခသြညျ.. စောကျပတျဆိုလြှငျ အမှေးနုရေးရေး လေးသာပေါကျသေးသညျ.. ပေါငျဖွဲပွီး စောကျပတျကို ဆယျမိနှဈခနျ့လြှကျပေးလိုကျသညျ…”အား ကိုးကွီးရယျ.. ဟငျ့….” ကောငျးလှနျးတော့ သူသူ စညညျးတော့သညျ… ပွီးမှ ပုဆိုးခြှတျကာ လီးကို သူသူမကျြနာနားတပေ့ေးလိုကျသညျ.. အစ်မစုစု လုပျနကေကြို တှဖေူ့းတော့ ဘာလုပျရမယျမှနျး သူသူ သိသညျ.. မငျးဒငျရဲ့ မာတောကျနတေဲ့ လီးဒဈပွဲကွီးကို ကိုငျကာ နုတျခမျးဖူးဖူးလေးနဲ့ စစုပျတော့သညျ.. လီးကကွီးလှနျးတော့
သူသူ့ပါးစပျကအပွညျ့ဖွဈနသေညျ…”စုပျစမျးကှာ ကောငျမ.. စုပျ .. လြှာနဲ့လြှကျပွီးစုပျ…အား .. စုပျစမျးကှာ…” မငျးဒငျပွောရငျး သူသူ ချေါငျးကိုငျကာ ပါးစပ်ကို လိုးတော့သညျ…”ပလှတျ ပလှတျ.. အား…စုပျစမျး ဖာသညျမလေး.. မငျးအဈမထကျ မငျးက ပိုမိုက်တာ.. မငျးအဈမကိုလိုးတာထကျ ပိုကောငျးအောငျလိုးပေးမယျ စုပျစမျး စောကျဖာသညျမ.. အား ကောငျးလိုကျတာ .. ” ခကျထနျသော စကားလုံးတှနေဲ့အတူ သူသူပါးစပ်ကို အဆကျမပွတျလိုးတော့သညျ.. သူသူ့မေးစကေို့ ဂှေးစနှေ့ဈလုံးက ဆကျတိုကျရိုကျနသေညျ.. လီးက အာခေါငျထဲထိ စောငျ့နပွေီး.. ခဏကွာတော့ ပါးစပျထဲ ညှီစို့စို့ အရညျမြားဝငျလာသညျ.. တဈအောငျ့လောကျနမှေ မငျးဒငျက သူသူ့ပါးစပျထဲမှ လီးဆွဲထုတ်ကာ…”ပလှတျ… မထှေးထုတျနဲ့ မြွိုခစြမျး စောကျကာငျမ…”သူသူလညျး နုတျခမျးမှာပါပေးနတေဲ့ လရညျတှကေိုပါလြှာနဲ့သပျပွီးမွိုခလြိုကျသညျ.. အပွုံးတော့မပကျြသေး…”အလိုးခံခငျြနတောမလား…” ပကျလကျလှနျပွီး ပေါငျကားထား..” သူသူလညျး လကျနှဈဖကျနှငျ့ ပေါငျဖွဲလိုကျတော့ စောကျပတျသေးသေးလေးကပွဲထှကျလာသညျ.. မငျးဒငျလညျး တံတှေးစှတျပွီး ဖိလိုးတော့သညျ “ဗွဈ ဗွဈ ဒုတျ.. အ…” အပြိုမှေးပေါကျသှားပွီး သှေးထှကျလာပမေယျ့ သူသူတဈခကျြတညျးမှဲ့ပွီး
ကွိတျခံနသေညျ… တျောတျောထနျတဲ့ ကလေးမပဲဟုတှေးပွီး ခပျကွမျးကွမျးလေး ဆကျတိုကျစောငျ့လိုးတော့သညျ…”ဖှနျ ဖှတျ အ အငျ့ အား….” စောကျပတျကကဉျြးလှနျးတော့ မငျးဒငျအဖို့ အရသာတှလှေ့နျးလှသညျ… သူသူ လညျးမနနေိုငျဘဲ…” အား.. ကိုကွီး ကောငျးတယျ.. ဘယ်လိုလဲမသိဘူး.. လုပျဥိး… ဒီထကျပိုကွမျးဦးကှာ… ပွဲသှားပါစေ….” ဒီလောကျဖွဈနတော “ကဲကွာ… ငါလိုးမလေး… ဖှတျ ဖှတျ ဗွဈ ဗွဈ….” အခကျြငါးဆယျလောကျ လိုးလိုကျတော့မှ သူသူပွီးလို့ငွိမျသှားသညျ… မငျးဒငျကတော့ မပွီးသေး… “ဖငျကုနျးပေးစမျး…” သူသူလညျး ဖငျကုနျးပေးတော့ မငျးဒငျက လကျကိုတံတှေးစှတျပွီး အပနျးရောငျစအိုဝကိုစခြဲ့သညျ.. စစခငျြးတော့ သူသူ နညျးနညျးရုနျးသညျ.. နောကျမှ ငွိမျခံကာ.. မငျးဒငျလညျးဂလကျအဆုံးထိထိုးထညျ့ကာ မှတေော့သညျ… ပွီးမှ မပွောမဆိုနဲ့ ဖငျဖွဲကာ လီးတပွေီ့းဖိသှငျးတော့ ဖငျပွဲသှားကာ သှေးထှကျလာသညျ..” ဗွိ.. အား နာတယျ”….”ငွိမျငွိမျနစေမျး ဖွနျးဖွနျး…” မငျးဒငျကဂမညာဘဲ ဖငျကို ရိုက်ကာ ဆကျဖိလိုးတော့သညျ… “ဗွိ ဗွိ အာ အ….” နာလှနျးလို့ သူသူမကျြရညျပငျကသြညျ… မငျးဒငျကတော့ ကိုးတနျးကြောငျးသူအငုံးလေးကို ပါကငျကော ခရပေါခွှခှေငျ့ရတော့ ဖီးတကျလှနျးနပွေီ… ” မှတျပွီလား .. ဖွနျး ဖွနျး ဘှတျ ဘှတျ..” တငျပါးရိုကျပွီး အခကျြငါးဆယျလောကျ ဆကျတိုကျ စောငျ့လိုးကာ စအိုထဲ လရညျပူတှပေနျးထညျ့လိုကျသညျ.. ဤသို့ဖွငျ့ မငျးဒငျအဖို့တော့ ခယျမငယျလေးသူသူကို အိမျကလူလဈတိုငျးလိုးတော့သညျ.. ကြောငျးမသှားခငျ ကြောငျးဆငျးအပွီး အမွဲလိုးကွလတေော့သညျ..
စုစု က ခုမှကျောင်းပြီးကာစ အလုပ်သင်ဆရာဝန်မလေး.. အေမျဖစ်သူ မုဆိုးမ ဒေါ်ခင်နု နှင့်အတူ ညီမငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်သူ မူမူ နဲ့ သူသူ တို့ မိန်းမသား လေးယောက်သာရှိသည်… ဒေါ်ခင်နုက မုဆိုးမဆိုပေမယ့် လင်ယောင်္ကျားမဆုံးခင်ကချန်ခဲ့သော စည်းစိမ်များကို အရင်းနှီးပြုပြီး ရတနာပြဲစားလုပ္ကာ ရွှေဆိုင်ဖွင့်ထားသဖြင့် နောက်အိမ်ထောင်မပြုဘဲ သမီးသုံးယောက်စလုံးကို သင့်တောင့်သင့်တယ်ထားနိုင်သည်… ဒေါ်ခင်နုက အရွယ်တင်သလို လှလည်းလှသည်.. အားကစားလိုက်စားတော့ ကိုယ္လုံးက အလတ်ကြီးကျန်သေးသည်…ပွဲစားလောကထဲတွက် မေသန်းနုဟု နာမည်ကြီးသည်.. ဒေါ်ခင်နုကတော့ စီးပွားရေးနဲ့ သမီးသုံးယောက်ရှေ့ရေးကိုသာ အာရုံစိုက်သူဖြစ်သည်.. ခုလည်း သမီးကြီးစုစု ကျောင်းပြီးလို့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်သင် အနေနဲ့စဆင်းရသည်… စုစုတို့ ညီအစ်မသုံးယောက်စလုံးကလည်း အမေအတိုင်းပဲ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး လုံးကြီးပေါက်လှလေးတွေဖြစ်သည်.. စုစုကေတာ့ သမီးအကြီးပီပီ မျက်နာတည်သည်.. ဆရာဝန်လောင်းဆိုတဲ့ပညာမာနရှိသည်.. ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကတော့ အိချောပိုလိုမျိုး.. မျက်နှာကျကတော့ မင်းသမီးပန်းဖြူလိုမျိုး နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သည်…
စုစု အလုပ်စဝင်ပြီး သုံးလလောက်နေတော့ တစ္မိသားစုလုံး မြို့ထဲကတိုက်ခန်းကိုရောင်းပြီး ဖော့ကန်ဘက်တွက် လုံးချင်းအိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ကာ ပြောင်းနေကြသည်.. မြို့ထဲနှင့်အနည်းငယ်အလှမ်းဝေးပေမယ့် ဒေါ်နုကအေးဆေးနေချင်သောကြောင့် ပြောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်…
ဒီနေ့စုစု ညဂျူတီကျသည်.. နေလည်းသိပ်မကောင်းချင်တော့.. ခွင့်ယူပြီး အိမ်စောစောပြန်ဖို့ လုပ်သည်.. အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ဖို့ လုပ်တော့ဖုန်းတိုင်ကပျောက်နေသည်… ပြန်နေကျပဲလေ ကိစ္စမရှိဘူးဟုတွေးပြီး ဒညင်းကုန်းထိပြန်မည့် ဆေးရုံကကားနှင့် လှမ်းကြုံစီးပြန်လိုက်သည်… စုစုတို့လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ကားရပ္ကာ စုစုဆင်းသည်… အချိန်က ည ၉နာရီခန့်… ခုထိဖုန်းလိုင်းကမမိသေး.. မီးကပျက်နေသည်… မိုးဖွဲများကျနေပြီး လေအနည်းငယ်ပါသည်.. လမ်းထိပ်ကနေ အိမ္ထိဆို အနည်းဆုံး ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်လျှောက်ရမည်..စုစု စိတ်ညစ်သွားပေမယ့် ဖုန်းမီးလေးဖွင့်ကာ မှောင်မဲနေတဲ့လမ်းကြားထဲ တစ်ယောက်တည်းပြန်လာသည်..အနည်းငယ်ကြောက်ပေမယ့်လည်း ပုံမှန်ပြန်နေကျဖြစ်သောကြောင့် စိတ်အေးအေးထားကာ ပြန်သည်.. လျှပ်စီးလက်သံနှင့်အတူ လေးပြင်းပြင်းလေးတိုးဝေ့လိုက်တိုင်း စုစု ထဘီပေါင်ပေါ်ထိလှန်သောကြောင့် ထဘီကိုလည်း မနည်းထိန်းကိုင်ကာလျှောက်ရသည်.. မိမိနောက်တွင်အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ခုပါလာသည်ကိုတော့ စုစု ကြိုသတိမထားမိခဲ့… ခြေသံသဲ့သဲ့လေးကြားမှ အနောက်လှည့်ကြည့်မယ်လုပ်တုန်း..
“အွန့်…” စုစု ပါးစပ္ကို ပိတ္ကာ လည်မြိုကို အချွန်တစ်ခုနှင့်ထောက်ထားသည်.. “မင်းနည်းနည်းလေး လှုပ်တာနဲ့ မင်းသေပြီသာမှတ်.. ငါ့နောက်ငြိမ်ငြိမ်လေးလိုက်ခဲ့…” ဟုဆိုကာ.. စုစုလည်း သေမှာကြောက်တော့ အသာတကြည်လိုက်သွားရသည်…
ရပ်ကွက်နှင့် အလှမ်းဝေးသော အိမ်အိုတစ်လုံးထဲ.. အင်ဗာတာ မီးသီးမှိန်မှိန်လေး ထွန်းထားသည်.. သင်ဖျူးဖြာ အနွမ်းပေါ်မှ စုစုက လက်နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခံထားရပြီး ဘေးစောင်းလှဲနေသည်… ခြေသံကြားရာဆီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မင်းဒင်…
မင်းဒင်ကား တခြားသူမဟုတ် ရပ်ကွက်ထဲနာမည်ပျက် မှုဒိမ်းကောင်ထောင်ထွက်ကားသမားပင်.. ပြီးခဲ့တဲ့တလော စုစုတို့အိမ္နား မင်းဒင်ဖြတ်လျှောက်နေတုန်းဘေးအိမ်က အဒေါ်ကြီးပြောပြလို့ မင်းဒင်မျက်နှာကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်… မုဒိမ်းကောင်ဆိုပေမယ့် မင်းဒင်က ရုပ်သန့်သည်.. အသားညိုညို ဘော်ဒီတောင့်ပြီးရင်အုပ်ကျယ်သည်.. ပါးသိုင်းမွေးရေးရေးလေနဲ့ ယောင်္ကျားပီသသည်.. ပုံမှန်စော်ကြွေလောက်တဲ့ ရုပ်ရည်ဆိုပေမယ့် ဝါသနာကြောင့်သာ မုဒိမ်းကောင်ဖြစ်နေခြင်းပင်.. အလိုတူတူ မတူတူ မင်းဒင်လိုးခဲ့သည့် မိန်းမများမှာ ဘဝပျက်ခဲ့ရတာကြီးပင်.. ဒါကိုလည်း မင်းဒင်ကဂုဏ်ယူနေခြင်းပင်..
မင်းဒင်ကိုမြင်တော့ စုစုအခြေနေကို သဘောပေါက်သည်.. ဘဝပျက်တော့မည်.. တစ်သက်လုံးရည်းစားမထားဘဲ မိသားစုအရေးနှင့် ပညာရေးကိုသာ ဥိးစားပေးခဲ့သမျှ ခုတော့ မုဒိမ်းကောင်ကြောင့် ဘဝပျက်ရတော့မည်… ” ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်.. ပြန်လွတ်ပေးပါနော်.. ရှင်လိုချင်တာ ပေးပါ့မယ်.. ဟင့်” ငိုသံနှင့်အသနားခံလေပြီ… မိုးကသည်းသထက်ပိုသည်းလာပြီး မိုးခြိမ်းသံတွေက စကားသံကိုပါမကြား.. မင်းဒင်က ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်မောလိုက်ပြီး.. ” ဟားဟား.. အေး.. ငါ လိုချင်တာကလည်း မင်းပေါင်ကြားထဲက စောက်ပတ်ဖောင်းဖေားင်းလေးကိုကွ…ဟားဟား…” ရိုင်းစိုင်းရင့်သီးလွန်းတဲ့စကားကြောင့် စုစုလည်း ပူထူသွားပြီး “ရှင် လူယုတ်မာ.. ကယ်ကြပါဦးရှင်…..” သံကုန်ခြစ်အော်သော်လည်း မိုးသံကိုတော့ မလွမ်းမိုးနိုင်…”ဟား ဟား အော်စမ်းပါ ဆရာမေလးရဲ့…ဘယ်လောက်အော်အော်ထူးမှာမဟုတ်… စိတ္ခ်ပါ မင်းကိုတစ်ခါပဲလိုးပြီး ပြန်လွတ်ပေးမှာပါ… ” ပြောရင်း ရမ္မက် အပြည့်နှင့် စုစုနားတိုးလာပြီး ထဘီစကပ်အကွဲအတိုင်း ပေါင်သားဖွေးဖွေးကို ဖိပွတ်လိုက်သည်… စုစုရုန်းသည်.. မင်းဒင်ကို ခြေတောက်ဖြင့်ကန်တော့ မင်းဒင်က ခြေတစ်ဖက်ကိုဖိထိုင်ပြီး တစ္ဖက္ကို ဘယ်ဘက်ချိုင်းအောက်ထည့်ကာချုပ်လိုက်တော့ ပေါင်ကားပြီးသားဖြစ်သွားသည်.. ထဘီအကွဲဝတ်ထားတော့ ပေါင်ဖြူဖြူကြားက ပင်တီအနီလေးပါပေါ်လာသည်… မင်းဒင်က အကြမ်းကြိုက်သူမို့ ပင်တီပေါ်ကနေ စောက်ပတ်ကို ဖိညစ်သည်…”အား..” နာကျင်လွန်းလို့အော်သံက အခန်းထဲတွင်ပျှံ့လွင့်နေသည်… ပြီးမှ ပင်တီကိုဆွဲချွတ်ပြီး ချွေးဆို့နေတဲ့ စောက်ပတ်ကျဉ်းလေးထဲ လက်နှစ်ချောင်းပူးကာ ကြမ်းကြမ်းလေး ထိုးကလော်လိုက်သည်… ” အား မလုပ်ပါနဲ့ရှင် တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်..” နာကျင်လွန်းလို့ စုစု မျက်ရည်ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျတော့ မင်းဒင်ပိုကျေနပ်သွားကာ စုစုရဲ့ရင်ဖုံးအင်္ကျီကြယ်သီးတွေကိုဆွဲဖြုတ်ပြီး ဘော်လီအနက်ရောင်ကို ဆွဲဖြဲကာ တင်းရင်းနေတဲ့ နို့ဖြူဖြူနှစ်လုံးကို အငမ်းမရဆွဲစို့သည်.. စုစု ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး တံတွေးတွေနဲ့ စိုရွှဲသွားသည်… ပြီးမှ မင်းဒင်က ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်တော့ ခုနှစ်လက်မလောက်ရှည်တဲ့ လီးက မြင်ရသူစုစုအဖို့ အသက်ရှူရပ်လောက်အောင်ထိတ်လန့်စေသည်.. လုံးပတ္က ရေသန့်ဘူး အသေးဆိုဒ်လောက်ရှိသည်.. မပြောမဆိုနဲ့ စုစုပေါင်ကိုဖြဲပြီး စောက်ပတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ လီးတေ့ကာ စလိုးတော့သည်.. လက်ချောင်းနှင့်ထိုးကတည်းက နာပြီးသွေးထွက်နေတဲ့စောက်ပတ်က အခုပိုနာရသည်.. မင်းဒင် မညာမတာဘဲ နို့ညစ်ပြီး အသားကုန်စောင့်လိုးသည်.. စုစုမှာတော့ နာလွန်းလို့ အော်ရသည်.. အမေမွေးကတည်းက ဒီအရွယ်အထိ ရေချိုးဆပ်ပြာတိုက်ရင်တောင် နာမွာဆိုးလို့ ဖြဖြေလး လုပ်ပြီး ယုယုယယထားခဲ့တဲ့ စောက်ပတ်နုနုလေး.. ခုတော့ မုဒိမ်းကောင် စိတ်ကြိုက် အကြမ်းပတမ်းလိုးတာခံနေရသည်.. “ဖွတ် ဖွတ် ဘုတ် ဗြစ် ဗြစ်…” လိုးသံက တစ်ခန်းလုံး ပွက်ပွက်ညံနေသည်… အိမ်ပြင် တံစက်မြိတ်ကရေကျသံထက် မင်းဒင်ရဲ့ လိုးခ်က္က စည်းချက်ပိုကျသည်… ဆယ့်ငါးမိနှစ်ခန့် အားရပါးရစောင့်လိုးပြီး.. စုစုစောက်ပတ်ပူနွေးသွားတဲ့အထိ လရည်တွေပန်းထည့်လိုက်သည်.. မင်းဒင် ပုဆိုးပြန်ဝတ်ပြီး စီးကရက်မီးညိကာ.. သွေးထွက်နေတဲ့ ဆရာဝန်လောင်း စောက်ပတ်လေးကိုကြည့်ရင်း ပီတိဖြစ်ရသည်… စုစုကေတာ့ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေဆဲ.. အိမ်ပြင်မှာမိုးကလည်း အဆက်မပြတ်ရွာနေသေးသည်….
“သမီးသူ့ကို တစ်သက်တစ်ကျွန်းထောင်ချနိုင်ရင် တောင် ကမ္ဘာမကြေနိုင်ဘူး မေမေ..” စုစု ရဲ့မကျေနပ်နိုင်လောက်တဲ့စကားကို ဒေါ်ခင်နုက လူကြီးပီပီ အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားသည်…ပြီးမှ..”ကဲ သမီး အမေ့ကိုပြော.. မနေ့ညကကိစ္စကို ဘယ်သူတွေသိသေးလဲ…” ဒေါ်စုရဲ့ မေးခွန်းကို စုစုက ရှက်ရှက်နှင့်.. “မေမေရယ်.. သမီးရယ်.. အဲ့ လူယုတ်မာ မုဒိမ်းကောင်ရယ်.. သုံးယောက်တည်းပါ…” စုစုရဲ့ ဒေါသသံပါတဲ့ ဖြေပုံကို ဒေါ်နုသေချာနားထောင်ပြီး မျက်ခုံးပင့်ကာ..”ကဲ ပြောပါဦး.. အဲ့ကောင်က ဘာအလုပ်လုပ်လဲ…” ဒေါ်နုရဲ့ အမေးအမြန်းကို စုစုက စိတ်မရှည်ပေမယ့် ပြန်ဖြေလိုက်သည်…” ဘေးအိမ်က အဒေါ်ကြီးကတော့ အဲ့ကောင်က ညဘက်တက္ကစီမောင်းတယ်တော့ ပြောတာပဲ…” ဒေါ်နု ဆယ်မိနစ်လောက် သေချာစဉ်းစားပြီးမှ သက်ပြင်းရှည်ချကာ…”ဟူး…. ဒီမွာသမီး… သမီးအတွက် နှစ်နာပြီး တစ်ဖက်သတ်ဆန်နေမှာကိုတော့ မေမေသိတယ်.. အေမ့သမီးကို စော်ကားတဲ့ သူ့ကို အမေကပိုလို့တောင်စိတ်နာသေးတယ်…ဒါပေမယ့် သူ့ကိုလက်ထပ်လိုက်ပါသမီး…” အံသြလောက်တဲ့ ဒေါ်ခင်နုစကားက စုစုနားထဲ သံရည်ပူလောင်းသလိုဖြစ်သွားသည်.. မဖြစ်နိုင်တာ ကိုယ့်ကိုစော်ကားတဲ့ မုဒိမ်းကောင်ကိုလက်ထပ် ဖို့ဆိုတာ… “အေမ… ဘယ်လိုဖြစ်လို့.. ဒီစကားထြက္တာလဲ ” စုစု မယုံကြည်နိုင်ဘူး… ဒေါ်ခင်နုကဆက်ပြီး..”အင်း သမီး.. မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်.. ဒါပေမယ့် သမီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်.. အဲ့ကောင်ကို တရားစွဲထောင်ချပြီပဲ ထားပါဥိး.. သမီးက အပျိုမဟုတ်တော့မှန်း သူများသိတော့ လူတွေကသမီးကို ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲ.. သမီးကိုကော လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ လက်ထပ်ယူကြမယ် ထင်လား.. သမီးရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း အမေ့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်း နောက်ဆုံး မင်းညီမလေးနှစ်ယောက် ကျောင်းမှာ မျက်နှာ ဘယ်လိုပြမလဲ…ဘဝမှာအမဲစက်အနေနဲ့ ကျန်နေခဲ့မှာ.. ပြီးတော့ မြန်မာမိန်းမသိက္ခာ.. အမေကိုယ်တိုင်ကလည်း သမီး အဖေနဲ့ကလွဲပြီး ဘယ်ယောင်္ကျားနဲ့ မွ လိင်မဆက်ဆံခဲ့ဘူး… သမီးကိုလည်း အမေ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်… သူများနဲ့ ဆက်ဆံပြီးမှ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကို လက်ထပ်မယူစေချင်ဘူး.. ဒါ အမေ့ဆန္ဒပဲ.. အမေလည်း သူ့ကိုရွံပေမယ့် မိသားစုသိက္ခာအတွက် သူ့ကို လက်ထပ်လိုက်ပါသမီး…” ဒေါ်ခင်နု စကားလည်းဆုံးရော စုစု အော်ငိုတော့သည်.. မလွဲသာသည့်အဆုံး မုဒိမ်းကောင်ကို လက်ထပ်ရန် သဘောတူလိုက်ရသည်….
မင်းဒင် အဖို့တော့ ဘယ်လိုမှမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေ.. ကြည့်လေ.. ညဖက်တက္ကစီ ခိုးဆြဲ တဲ့ မုဒိမ်းကောင်ဘဝကနေ.. ဆရာဝန္မ လင် သူဌေးသားမက် ဘဝသို့ ရောက်နေပြီတကား…
ဟို တစ်ခေါက်က အတင်းရုန်းလို့ အတင်းမုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ရတော့ စုစုရဲ့ အလှအပကိုသေချာမခံစားမိခဲ့.. ခုတော့ ကံတရားရဲမ်က္နာသာက ဆရာဝန်မချောချောလေးကို ဇနီးအဖြစ် တရားဝင် လိုးခွင့်ရပြီလေ… စုစုမှာတော့ မင်းဒင်ကို ရွံတဲ့စိတ်က ဖျောက်လို့မရ…
အိပ်ခန်းထဲ မင်းဒင်ရောက်တော့.. စုစုက ဂရုမစိုက်ဘဲ စားပွဲပေါ်က ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေသည်.. ညလည်း ဆယ်နာရီကျော်ပြီမို့ မင်းဒင်က စိတ်မရှည်ဘဲ စုစုအေနာက္ကေန လှမ်းဖက်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို ညဝတ်ဂါဝန်ပေါ်က ဖွဖွလေးကိုင်ကာ လည်တိုင်ဖြူဖြူလေးကို နမ်းပြီး..” ချစ်လေး အိပ်တော့မယ်လေကွာ.. ကိုကဂစောင့်နေတာချစ်လေးကို ဟဲဟဲ…” စုစုကလည်း.. “ဒီမွာ အလုပ်လုပ်နေတာ နားမလည်ဘူးလား.. ရှင့်ဖာသာအိပ်ချင်အိပ် မနိုးလေကောင်းလေပဲ..” သူစိမ်းဆန်လွန်းတဲ့ စုစု စကားကို မင်းဒင်စိတ်မဆိုးဘဲ.. ချိုင်းအောက်က လက်လျှိုကာ ဘော်လီမဝတ်ထားတဲ့ ရင်နှစ်မွာကိုညစ်ပြီး နို့သီးခေါင်း လေးတွေကိုချေပေးလိုက်သည်.. စုစုရဲ့ ခါးကိုလည်း လီးဖြင့်ထောက်ထားသေးသည်.. စုစုကရုန်းသော်လည်း.. မင်းဒင်ရဲ့ ဆရာကျလွန်းသော နို့ကလိမှုကြောင့် ငြိမ်သွားသည်.. ပြီးမှ စုစု ကိုမျက်နာချင်းဆိုင်ရပ်စေပြီး.. နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းပြီး.. ဂါဝန္မကာ ဖင်နှစ်ခြမ်းကို ပွတ်သည်.. စုစုကို စားပွဲပေါ်ထိုင်စေပြီး.. ဂါဝန္ကို အပေါ်လှန်ကာ ပေါင်ဖြဲလိုက်တော့ အနာပင်မကျက်သေးတဲ့ စောက်ပတ်လေးက ပြူးထွက်လာသည်.. မင်းဒင်စိတ်မထိန်းဘဲ စောက်စိကို စုပ္ကာ လျှာနဲ့လျှက်တော့သည်.. “ရွှတ် အား အင်း ရှင်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ.. ညစ်ပတ်တယ်…” စုစု မနေနိုင်တော့ဘဲ မင်းဒင်ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ပေါင်ကြားထဲ အတင်းထိုးကပ်သည်.. စောက်ရည်ကြည်များထွက်လာတော့ မင်းဒင်မြိုချပြီး ဖင်ညစ်ကာ စောက်ပတ်ခေါင်းထဲထိလျှာနဲ့ထိုး ကလိသည်…”ပလပ် ရွီး အား…..” ခန နေတော့ စောက်ခေါင်းထဲမှအရည်များထွက်လာပြီး စုစု တစ်ချီပြီးသွားသည်… “ဘယ္လိုလဲ ကောင်းလား သဲလေး…” မ်က္နာမွာ စောက်ရည်ပေပွနေတဲ့ မင်းဒင်အမေးကြောင့် စုစုနေရခက်သွားသည်.. တစ်ခါမှ မခံစားဖူးတာမို့ အရသာထူးကဲနေသည်.. ခေါင်းလေးသာငြိမ်းလိုက်သည်… မင်းဒင်က ပြုံးပြီး စုစုကို ကုတင်ပေါ်ပွေ့ကာ.. တစ်ကိုယ်လုံးချွတ်လိုက်တော့ အားပါး.. နတ်မိမယ်လေးလိုပင်.. လိုးဖူးသမျှမိန်းမတွေထဲ ဒီမိန်းမအလှဆုံးပင်.. ကိုယ္လုံးတီးအလွ နဲ့ စုစုကိုကြည်ပြီး မင်းဒင် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ လီးထိတ် တံတွေးစွတ်ပြီး စောက်ပတ်ဝတေ့ ကာဖြည်းဖြည်းချင်းလိုးသည်..”ဗြိ ဗြစ် အင့် အား…” တစ်ခါကြမ်းကြမ်းခံဖူးတော့ ဒီတစ်ခါ စုစုသိပ္မနာဘဲ မင်းဒင် လိုးချက်တိုင်းကို ကော့ကော့ပေးသည်… ပြီးမှ စုစုကို ဖင်ကုန်းခိုင်းကာ အေနာက္က စောင့်လိုးသည်… လက်ညိုးကလည်း စအိုဝကို ထိုးကလိသည်.. ခါးကိုင်လိုးလိုက် ဆံပင်စောင့်ဆွဲပြီးလိုးလိုက်လုပ်သည်….”အား ကောင်းလိုက်တာ သဲလေးရာ စောက်ပတ်က စီးနေတာပဲ… ဘွတ်ဘွတ်” စောက့်လိုးချက်နဲ့ အတူ နို့နှစ်လုံးက ပြုတ်ထွက်မတတ်ခါရမ်းနေသည်… မင်းဒင်လည်း အားရပါးရ ဆက်တိုက်စောင့်လိုးပြီး သုတ်ရည်များ ပန်းထည့်ကာ ပြီးသွားတော့သည်.. ထို မင်္ဂလာဦးညမှ စပြီး စုစုလည်း မင်းဒင်ကိုအမြင်ကြည်သွားသည်.. တစ်ရက်ဂအနည်းဆုံး နှစ်ခါလောက်တော့ အလိုးခံပေးသည်.. စောက်ပတ်ကော ပါးစပ်ကော ဖင်ကော နေ့တိုင်း အလိုးခံရသည်…
မင်းဒင်က ကားမောင်းရုံကလွဲပြီးဘာမှ မလုပ်တတ်သောကြောင့် အိမ်ကားမောင်းရသည်.. ဒေါ်ခင်နုကတော့ မင်းဒင်ကို ဒရိုက္ဘာ တစ်ယောက်လိုသာ ဆက်ဆံသော်လည်း အလတ်မနှင့် အငယ္မကမူ မင်းဒင်ကို ချစ်ကြသည် အစ္ကို တစ်ယောက်လို အားကိုးသည်.. အိမ်မှာ ယောင်္ကျားသားမရှိခဲ့လို့လည်းဖြစ်မည်.. ဒီနှစ်ယောက်တည်းမှာမှ အငယ္မ သူသူ ကပိုကဲသည်.. မင်းဒင်နှင့် ဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ်နေသည်.. တစ်ခါတလေ ဧည့်ခန်းထဲ tv ကြည့်ရက်း မင်းဒင်ပေါင်ပေါ်မှာ ကလေးလိုပင် အိပ်ပျော်တတ်သည်.. စုစုက တော့ ညီမလေးနှစ်ယောက် မိမိအမျိုးသားကို အားကိုးသောကြောင့် ပီတိဖြာရသည်.. ဒေါ်ခင်နုကတော့ ဂရုကိုမစိုက် ခပ်တန်းတန်းပင်နေသည်… မင်းဒင်မူကား.. စားနေကျကြောင်ပါးပီပီ.. တစ်အိမ်လုံးကို သိမ်းချင်သည်.. သိမ်းချင်တယ်ဆိုတာ ပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်.. သိမ်းကျုံးလိုး ချင်တာကိုပြောတာ.. ဒါကြောင့်လည်း အခွင့်ရေးတွေဖန်နေခြင်းဖြစ်သည်…
တစ်နေ့… မင်းဒင်နှင့် သူသူတို့နှစ်ယောက်တည်း ဧည့်ခန်းမှာ tv ကြည့်သည်.. ထုံးစံအတိုင်း သူသူက မင်းဒင်ပေါင်ပ်ါအိပ်ကြည့်ရင်း မှေးကနဲအိပ်ပျော်သွားသည်… သူသူက ခုမွ ကိုးတန်းဆိုပေမယ့် မင်းသမီးငယ်လေး ယွန်ယွန်းနှင့်ပုံစံတူ.. နုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး နို့မကြီးဖင်မကြီးဆိုပေမယ့် အပျိုတော့ဖြစ်နေပြီ.. မင်းဒင်အဖို့တော့ မိန်းမမှန်လျှင် ရာသီလာကတည်းက စလိုးမယ့် အရွယ်ဟု ခံယူထားခြင်းပင်.. ခုလည်းကြည့် အငယ္မ မိသူ့ ပေါင်ပ်ါအိပ်နေပုံ.. အပြစ်ကင်းစင်လွန်းလှသည်.. မင်းဒင်က သူသူ ညဝတ်အင်္ကျီအာက်လက်လျှိုကာ ဗိုက်သားမှတဆင့် ဘရာမဝတ္ထားတဲ့ နို့သေးသေးလေးနှစ်လုံးကို ပွတ်သည်.. သူသူ အနည်းငယ် လှုပ်ရှားလာတော့ မင်းဒင်လှန့်သွားသေးသော်လည်း ပြန်ငြိမ်သွားမှ မင်းဒင်စိတ်သက်သာပြီး ပြုံးလိုက်သည်.. ပြီးမှ ညဝတ်ဘောင်းဘီပါးအောက်ကနေ စောက်ပတ်ကို စမ်းကြည့်တော့ အရည်ချွဲများဆိုနေသည်.. ဒီကောင်မလေး အိပ်ချင်ဟန်ဆောင်နေမှန်း မင်းဒင်ရိပ်မိသွားသည်… ထို့ကြောင့် သူသူ့လက်တစ်ဖက်ကို ယူကာ ပုဆိုးအောက်ထည့်ပြီး လီးကိုင်ခိုင်းတော့ သူသူလည်း ဖြဖြေလး ကိုင်ထားသည်.. ဇာတ်လမ်းကတော့ အဆင်ပြေနေပြီ..
“ကို မင်းဂ.. မအိပ်သေးဘူးလား မိုးချုပ်နေပြီ…” ရုတ်တရက် အခန်းထဲမှ စုစု ခေါ်သံကြောင့် မင်းဒင်ကော သူသူကောဂလှန့်ပြီးငြိမ်သွားသည်.. မင်းဒင် အိပ်ခန်းထဲ ဝင်သည်အထိ သူသူကေတာ့ ဆိုဖာပေါ်မှာ အိပ်ဟန်ဆောင်နေဆဲ….
ဒီနေ့ အလတ်မကို ကျောင်းအရင်ပို့ရမည်.. ပြီးယောက္ခမ.. ပြီးမိန်းမစုစု ကို ဆေးရုံရှေ့ချပေးလိုက်သည်… သူသူကိုကျောင်းပို့ဖို့ပဲကျန်သည်.. ကျောင်းက ၉ နာရီမှတက်မှာ ခုမွ ၈နာရီကျော်ကျော်.. ဆေးရုံနှင့်ကျောင်းက သိပ်မဝေးတာမို့ဂဆယ်မိနစ်လောက်သာမောင်းရမည်….” ဟဲ့ မိသု အရှေ့ခန်းလာထိုင်စမ်း လာ…” မင်းဒင်ကခေါ်တော့ သူသူလည်း အရှေ့ခန်းဝင်ထိုင်သည်…ဆံပင်ကိုငါးရိုးပုံစည်းထားပြီး သနပ်ခါးပါးကွက်ကြား ရင်ဖုံးကျောင်းဖြူလေးနဲ့ ခယ်မငယ်လေး သူသူ လှပြီးချစ်စရာကောင်းလွန်းလှသည်..ကျောင်းစိမ်းချိတ်ထဘီစကပ်နှင့် ကားပေါ်တက်တော့ ပေါင်သားဖွေးဖွေးလေးကို တွေ့ရသည်.. မင်းဒင် ငပဲကို မနည်းထိန်းပြီး ဆေးရုံမှ စမောင်းထွက်တော့သည်.. ကျောင်းမရောက်ခင် လမ်းတစ်ဝက်လောက် မီးပွိုင့်မိသည်.. ရုံးတက်ကျောင်းတက်ချိန်မို့ တော်တော်ကြာမည်ကို သိသည်.. ထိုစဉ် မင်းဒင်လက်က သူသူပေါင်ပေါ်ကနေစပံတ်တော့သည်.. သူသူလည်းဘာမှမတုံ့ပြန်ဘဲငြိမ်ခံနေသည်.. စိတ်ကစားတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တော့ မင်းဒင်က အထာနပ်သည်.. လက်ကအရဲစွန့်ကာ ထဘီကြားထဲဝင်ပြီး ပေါင်သားလေးကိုပွတ်နေတုန်း မီးပွိုင့်စိမ်းသွားသည်… ကျောင်းရှေ့ရောက်တော့.. “ပေးစမ်း မင်းလွယ်အိတ်..” ဟုပြောကာ သူသူလွယ်အိတ်ထဲမှ ခွင့်စာကဒ်ယူဖြည့်ပြီး “ဘယ် မသွားနဲ့ ..ကားပေါ်ကစောင့်နေ..” ဟုဆိုကာ ကားတံခါးပိတ်ပြီး ကျောင်းထဲဝင် ခွင့်စာသွားပေးပြီး ပြန်ရောက်လာကာ “မင်း ဒီနေ့ ကျောင်းမတက်နဲ့.. ခွင့်တိုင်ပြီးပြီ..” ဟုပြောပြီး ကားမောင်းကာ အိမ်ပြန်သည်.. သူသူက ဘာတစ်ခွန်းမှ မပြော စိတ်ကစားတဲ့အရွယ်ဖြစ်သလို မင်းဒင်နဲ့ စုစု လိုးတာကိုလည်း မြင်ဖူးသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ မင်းဒင်အပေါ်စိတ်ယိုင်မိခြင်းပင်… “ကျွိ….” အိမ်ရှေ့ကားထိုးရပ်ပြီး… ဧည့်ခန်းထဲဝင်ထိုင်ကာ… မင်းဒင်က.. “လာ မိသု.. ငါ့ပေါ်ထိုင်” ပြောပြီ.. သူသူကို ဆြဲကာ ပေါင်ပေါ်ထိုင်ခိုင်းသည်.. ပြီးမှ သနပ်ခါးတင်ထားတဲ့ ပါးပြင်ကို အနမ်းပေးပြီး နုတ်ခမ်းကိုလျှာနဲ့ အတင်းထိုးထည့်ကာ စုပ်နမ်းတော့သည်.. လက်ကလည်း ကျောင်ဖြူအင်္ကျီပေါ်ကနေ နို့လေးကိုင်လိုက် ဖင်လေးပွတ်လိုက်လုပ်သည်.. သူသူ ကေတာ့ မင်းဒင်ပြုသမျှ ငြိမ်ခံနေသည်.. မင်းဒင်က ဆက်ပြီး သူသူ့ရင်ဖုံးအင်္ကျီကို ချွတ်ပြီး ဘရာဇီယာကိုပါ ချိတ်ဖြုတ်လိုက်တော့ ရေနွေးခွက်အရွယ် နို့လေးနှစ်လုံးက ထွက်လာသည်.. နို့သီးခေါင်းလေးတောင် သေးနေသေးသည်.. မင်းဒင်က နို့သီးခေါင်းလေးကို ဆွဲချေလိုက် စို့လိုက်လုပ်တော့ သူသူ ခါးကော့သွားသည်.. “အင်း အား ကို့ကြီး ရယ် ဟင့်…” ကျောင်းစိမ်းထဘီ ချိတ်ကိုပါဖြုတ်ချွတ်ပြီး ပင်တီအပန်းရောင်လေးကိုပါချွတ်လိုက်တော့ သူသူတစ္ကိုယ္လုံး အဝတ်ဗလာဖြစ်သွားသည်.. ငယ်သော်လည်း ထြားတဲ့ အလှကိုကြည့်ရင်း မင်းဒင်တံတွေးမြိုချသည်.. စောက်ပတ်ဆိုလျှင် အမွေးနုရေးရေး လေးသာပေါက်သေးသည်.. ပေါင်ဖြဲပြီး စောက်ပတ်ကို ဆယ်မိနှစ်ခန့်လျှက်ပေးလိုက်သည်…”အား ကိုးကြီးရယ်.. ဟင့်….” ကောင်းလွန်းတော့ သူသူ စညည်းတော့သည်… ပြီးမှ ပုဆိုးချွတ်ကာ လီးကို သူသူမျက်နာနားတေ့ပေးလိုက်သည်.. အစ္မစုစု လုပ်နေကျကို တွေ့ဖူးတော့ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း သူသူ သိသည်.. မင်းဒင်ရဲ့ မာတောက်နေတဲ့ လီးဒစ်ပြဲကြီးကို ကိုင်ကာ နုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ စစုပ်တော့သည်.. လီးကကြီးလွန်းတော့ သူသူ့ပါးစပ်ကအပြည့်ဖြစ်နေသည်…”စုပ်စမ်းကွာ ကောင်မ.. စုပ် .. လျှာနဲ့လျှက်ပြီးစုပ်…အား .. စုပ်စမ်းကွာ…” မင်းဒင်ပြောရင်း သူသူ ခေါ်င်းကိုင်ကာ ပါးစပ္ကို လိုးတော့သည်…”ပလွတ် ပလွတ်.. အား…စုပ်စမ်း ဖာသည်မလေး.. မင်းအစ်မထက် မင်းက ပိုမိုက္တာ.. မင်းအစ်မကိုလိုးတာထက် ပိုကောင်းအောင်လိုးပေးမယ် စုပ်စမ်း စောက်ဖာသည်မ.. အား ကောင်းလိုက်တာ .. ” ခက်ထန်သော စကားလုံးတွေနဲ့အတူ သူသူပါးစပ္ကို အဆက်မပြတ်လိုးတော့သည်.. သူသူ့မေးစေ့ကို ဂွေးစေ့နှစ်လုံးက ဆက်တိုက်ရိုက်နေသည်.. လီးက အာခေါင်ထဲထိ စောင့်နေပြီး.. ခဏကြာတော့ ပါးစပ်ထဲ ညှီစို့စို့ အရည်များဝင်လာသည်.. တစ်အောင့်လောက်နေမှ မင်းဒင်က သူသူ့ပါးစပ်ထဲမှ လီးဆြဲထုတ္ကာ…”ပလွတ်… မထွေးထုတ်နဲ့ မျြိုချစမ်း စောက်ကာင်မ…”သူသူလည်း နုတ်ခမ်းမှာပါပေးနေတဲ့ လရည်တွေကိုပါလျှာနဲ့သပ်ပြီးမြိုချလိုက်သည်.. အပြုံးတော့မပျက်သေး…”အလိုးခံချင်နေတာမလား…” ပက်လက်လှန်ပြီး ပေါင်ကားထား..” သူသူလည်း လက်နှစ်ဖက်နှင့် ပေါင်ဖြဲလိုက်တော့ စောက်ပတ်သေးသေးလေးကပြဲထွက်လာသည်.. မင်းဒင်လည်း တံတွေးစွတ်ပြီး ဖိလိုးတော့သည် “ဗြစ် ဗြစ် ဒုတ်.. အ…” အပျိုမှေးပေါက်သွားပြီး သွေးထွက်လာပေမယ့် သူသူတစ်ချက်တည်းမှဲ့ပြီး ကြိတ်ခံနေသည်… တော်တော်ထန်တဲ့ ကလေးမပဲဟုတွေးပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆက်တိုက်စောင့်လိုးတော့သည်…”ဖွန် ဖွတ် အ အင့် အား….” စောက်ပတ်ကကျဉ်းလွန်းတော့ မင်းဒင်အဖို့ အရသာတွေ့လွန်းလှသည်… သူသူ လည်းမနေနိုင်ဘဲ…” အား.. ကိုကြီး ကောင်းတယ်.. ဘယ္လိုလဲမသိဘူး.. လုပ်ဥိး… ဒီထက်ပိုကြမ်းဦးကွာ… ပြဲသွားပါစေ….” ဒီလောက်ဖြစ်နေတာ “ကဲကြာ… ငါလိုးမေလး… ဖွတ် ဖွတ် ဗြစ် ဗြစ်….” အချက်ငါးဆယ်လောက် လိုးလိုက်တော့မှ သူသူပြီးလို့ငြိမ်သွားသည်… မင်းဒင်ကတော့ မပြီးသေး… “ဖင်ကုန်းပေးစမ်း…” သူသူလည်း ဖင်ကုန်းပေးတော့ မင်းဒင်က လက်ကိုတံတွေးစွတ်ပြီး အပန်းရောင်စအိုဝကိုစချဲ့သည်.. စစချင်းတော့ သူသူ နည်းနည်းရုန်းသည်.. နောက်မှ ငြိမ်ခံကာ.. မင်းဒင်လည်းဂလက်အဆုံးထိထိုးထည့်ကာ မွေတော့သည်… ပြီးမှ မပြောမဆိုနဲ့ ဖင်ဖြဲကာ လီးတေ့ပြီးဖိသွင်းတော့ ဖင်ပြဲသွားကာ သွေးထွက်လာသည်..” ဗြိ.. အား နာတယ်”….”ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း ဖြန်းဖြန်း…” မင်းဒင်ကဂမညာဘဲ ဖင်ကို ရိုက္ကာ ဆက်ဖိလိုးတော့သည်… “ဗြိ ဗြိ အာ အ….” နာလွန်းလို့ သူသူမျက်ရည်ပင်ကျသည်… မင်းဒင်ကတော့ ကိုးတန်းကျောင်းသူအငုံးလေးကို ပါကင်ကော ခရေပါခြွေခွင့်ရတော့ ဖီးတက်လွန်းနေပြီ… ” မှတ်ပြီလား .. ဖြန်း ဖြန်း ဘွတ် ဘွတ်..” တင်ပါးရိုက်ပြီး အချက်ငါးဆယ်လောက် ဆက်တိုက် စောင့်လိုးကာ စအိုထဲ လရည်ပူတွေပန်းထည့်လိုက်သည်.. ဤသို့ဖြင့် မင်းဒင်အဖို့တော့ ခယ်မငယ်လေးသူသူကို အိမ်ကလူလစ်တိုင်းလိုးတော့သည်.. ကျောင်းမသွားခင် ကျောင်းဆင်းအပြီး အမြဲလိုးကြလေတော့သည်..
အိုးးး ဘာကွီးလဲ မမ